Vegetable Dicing Machine - BaganMart
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 760 view counts
Model : VD 800
လုပျငနျးအမညျ : Mechem Machinery Group Co.,Ltd Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 01-8100367,09-5104779,09-5131990,09-5062687
Capacity : 300~1000 kg/hr
Size of Product : 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 mm
Cutting Shape : Cubic Cut
Cutting : vegetable and fruits
Hygienic construction : 100%
To meet the variegated requirements of agriculture industry, we are engaged in manufacturing, supplying and exporting qualitative Vegetable Dicing Machine. The offered machine is manufactured by employing cutting-edge technology and advanced machinery, under the guidance of experts who have rich industry experience. Owing to its excellent performance and compact structure, thisVegetable Dicing Machine is highly demanded in the market.
Mechem Machinery Group Co.,Ltd ကို ၂၀၀၀ ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုသော စက်ပစ္စည်းများကို တင်သွင်းဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပေးနေပါသည်။ စက်ပစ္စည်းများ၏ ခိုင်ခံမူ၊ ဈေးနူန်းမှန်ကန်တိကျမူ၊ တာရှည်ခံနိုင်မူ စသည့် ကောင်းမွန်သော စက်ပစ္စည်းများကိုသာ တင်သွင်းထားပါသည်။ မိမိနိုင်ငံတွင် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် စက်ပစ္စည်းကောင်းသုံးစေချင်သော စေတနာဖြင့် တင်သွင်းဖြန့်ချိ ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
Ginger Cutting Machine (ဂျင်းဖျက်စက်)
Multiple Vegetable Washer (ဟင်းသီးဟင်းရွက်သန့်စင် ဆေးကြောစက်)
Seaied Type Muiti-Deck Vibratory Separator
Fully Automatic Gas Ovenမုန့်ဖုတ်စက်
For Vegetable Dicing Machine
May I get the quotation for " Vegetable Dicing Machine" ?